Kukhona amacala uma abazali bekusasa bethukuthele ngesikhathi sokuqala kwe-ultrasound, sebefunde ukuthi ingane yezocansi ezihlukile kakhulu abayiphupha kakhulu izozalelwa.
Amadoda amaningi nje aphupha ngokuzalwa komfana. Ngokushesha, umfazi onothando ujoyina leli phupho ukuze ajabulise umyeni wakhe futhi ahlangane nomkhaya wakhe nakakhulu, uyakhokha konke umbuzo wokuhlela ukukhulelwa nomfana kusengaphambili. Kukhona umbono wokuthi usengakwazi "ukuyala" uhlobo lwesondo lomntwana. Ngakho-ke, ngiphakamisa izindlela zokuhlela ukukhulelwa ngumfana.
Ukukhuthaza ukukhulelwa ngumfana, kubalulekile ukulawula ions i-sodium ne-potassium, kuyilapho ukunciphisa i-magnesium ne-calcium ions. Ngenxa yalokhu, kunconywa ukuba ukhethe inhlanzi, inyama, amakhowe amazambane, ubhontshisi omhlophe owomile, ama-peas omisiwe, i-lentile, wonke ama-ubhontshisi ngenkathi bedla, amaprotheni kuphela angadliwa kusukela eqanda. Ngokuphathelene nezithelo, zithanda ama-apricot, ama-peaches, imifula, ama-cherries, kanye nezithelo ezomile - ama-apricot nezinsuku ezomisiwe. Kuvunyelwe ukuphuza itiye, izithelo zezithelo, ubhiya, amaminerali e-soda amaminerali. Ngakho owesifazane ozama ukuhlela ukukhulelwa nomfana uyoba usizo kakhulu amabhisikidi, amakhukhi, ilayisi, i-semolina, nemvubelo kanye nokudla okusemathinini. Kubalulekile ukuba usawoti konke ukudla ngangokunokwenzeka.
Zama ukukhipha emakhakheni akho okugaya amaminerali nge-calcium, yonke imikhiqizo yobisi engenzeka, i-caviar, ama-crab, ama-shrimp, ama-pastries, ekuvivinyweni okukhona amaqanda, imikhiqizo ye-confectionery ebisi, ama-pancake, isinkwa, ama-crank. Kumele futhi ugweme ubhontshisi obuluhlaza, isaladi eluhlaza, iklabishi eluhlaza, i-dill, ubhontshisi obomvu, i-watercress, i-hazelnut, i-walnuts, i-almonds, amantongomane, ushokoledi ubisi kanye ne-cocoa. Ukudla kumele kulandelwe kusukela ekuqaleni komjikelezo wokuya esikhathini nokucabanga okulindelekile.
Ngokwemvelo, isiqiniseko sokukhulelwa okungamaphesenti angu-100 akusengumfana, kodwa ngokusho kwezibalo lokhu cishe cishe ngu-82%. Kuze kube manje, ayikho incazelo egcwele yesayensi yale nqubo. Nakuba kucatshangwa ukuthi imisebenzi ye-endocrine yomzimba wesifazane, ibhalansi ye-hormone, ingashintsha, konke lokho kuphazamisa ama-cell cells. Akukazeki ukuthi ukudla okwesikhashana ekuhleleni kokukhulelwa ngumfana akubanga neze umonakalo emzimbeni womama ozayo. Emva kokukhulelwa, owesifazane angakwazi, unakho konke okukufunayo (futhi ngokufanayo kuyasiza kumntwana).
Imvamisa ephakanyisiwe yezenzo zocansi zokukhulelwa ngumfana.
Le ndlela isekelwe eqinisweni lokuthi i-spermatozoa "yindoda" iphindaphindwa izikhathi eziningana futhi iselula kakhulu, yize isikhathi sokuphila salesi siprotozoa singaphansi. Futhi "spermatozoons" yezinsikazi - ngokuphambene nalokho. Ngakho-ke, uma unquma ukuhlela ukukhulelwa njengomfana, kufanele ube nobulili njalo ngangokunokwenzeka. Ngakho ngezikhathi eziningi zobulili, emkhawulweni wamathuba omuntu - ekujuleni kwegazi kunezinhlobo zombili "zezinsikazi" nezidalwa "zesilisa" ezilinganiselwe, kodwa lezi zinsuku zithatha phezulu ngenxa yokuhamba okusebenzayo nezinamba eziningi.
Endabeni yezocansi ezingavamile, ukuhlushwa kwe-"spermatozoa" kwanda kakhulu, ukuqina kwabo okwandayo kudlala indima lapha.
Le ndlela, ukuhlela ukukhulelwa ngumfana, ithwala isiqinisekiso esingu 70-80%.
Ngeminyaka engapheliyo eminyakeni yobudala.
Ukuhlolwa komunye wabameli bezinye izindlela zokwelapha u-Elena Shavrina kubonise ukuthi ubulili bomntwana bungathembela ngqo kuneminyaka engunina. Ngakho-ke, ngombono wakhe, kungenzeka ukuba ukhulelwe umfana eminyakeni eyiyo yokuphila kowesifazane ngezinyanga ezinjalo: Mashi, Julayi, Meyi, January, September, Novemba. Eminyakeni engavamile yokuphila, kungenzeka ukuthi ukhulelwe umfana ngoFebhuwari, Novemba, Juni, Okthoba, Agasti noFebhuwari. Lapho intombazane ikhulelwa, ikhalenda yakhe engavumelani nayo isebenza ngokuphambene nalokho. Le ndlela ayinayo i-100% esebenzayo, isebenza kuphela uma owesifazane evuleka phakathi nenyanga yekhalenda.
Indlela yokuvuselelwa kwegazi.
Le ndlela futhi ayikwazi ukubizwa ngokuthi yendabuko, kodwa ngokuvamile isetshenziselwa ukuhlela ukukhulelwa kusengaphambili ngumfana.
Okokuqala, kubalulekile ukubala iminyaka yabo bobabili abazali ekunemba kosuku. Esikhathini esilandelayo, ubudala bomama buhlukaniswa abathathu, kanti ubaba abane. Amanani atholakala emilingo abonisa ukuthi igazi livuselelwa kaningi emzimbeni womuntu - njalo eminyakeni emine emadodeni, njalo eminyakeni emithathu kwabesifazane. Ngokuhambisana nalokhu, kumele sicabangele amacala okulahlekelwa okukhulu kwegazi - ukuhlinzwa, ukumpontshelwa igazi, ukubeletha. Ama-decimal ahlotshaniswa kufanele afaniswe, ubulili bezingane ezizayo kubonakala ngobulili bomzali onomlando omkhulu wezinto eziphilayo (futhi ngokufanele, igazi lawo "elisha"). Iqiniso elibalulekile, uma umama ene-Rh factor, ngakho-ke konke kubukeka okuphambene nalokho okusele. Ngokuvamile isibikezelo sinomphumelelo ophezulu kakhulu we-68% kuya ku-98%.
Eminye imibhangqwana izama ukuhlela ubulili bomntwana ngokuzimela okuthile ngesikhathi sesenzo socansi. Ngakho, ukuze uhlele ukukhulelwa njengomfana, isikhundla esihle kunazo zonke kubhekwa njengendoda "engemuva".
Noma iyiphi yezindlela ezinikezwe, ngeke ukwazi ukukunikeza isiqinisekiso esingu-100%. Kodwa into ebaluleke kakhulu: abashade kudingeka bazane futhi ngokuqinisekile bajabulele ukusondelana. Ngesimo sengqondo esibucayi phakathi kwabazali besikhathi esizayo, ungakwazi "ukuphazamisa" imvelo futhi ulinde ukuzalwa kwendodana encane ehahayo.
Khumbula ukuthi ngemuva kokukhulelwa kwengane, akunakwenzeka ukushintsha ubulili bakhe. Izazi zengqondo ziluleka kakhulu lo mbhangqwana ukuba zikhohlwe ngokuphelele ngomqondo wokuhlela ucansi. Uma kungenjalo, umntwana, ngisho nangaphambi kokuzalwa, uyozizwa engadingeki.
Uma ukukhulelwa komntwana okuphoqelekile kuyingozi, futhi kunakekelwa kakhulu, kungcono ukuba ushiye ngokuphelele umqondo wokuhlela. Ngempela, lapho kwenzeka intombazane, abazali bangase badumale, futhi ingane ngeke ithole ukunakekelwa okufanele.
Kodwa namanje, uma ingane yakho yamukelekile - lokhu kuyinto enhle injabulo enkulu, futhi ayikwazi, kuxhomeke kobulili bomntwana.
Lapho i-toxemia yokuqala iqala
Ingxenye 2. Ukuzilibazisa ngesikhathi sokukhulelwa: yini engakwazi futhi engenakwenziwa?
Ukushayela wesifazane okhulelwe
Inhliziyo enempilo ngesikhathi ukhulelwe
Izitsha ezingavamile ze-apula: iresiphi
I-Technique yokukhipha ubuhlalu
Burrito nge inkukhu kanye pepper
Ubuhlobo phakathi kwendoda nowesifazane: ubulili
Indlela yokwenza izimonyo isikhathi eside
I-glucose ibuyiselwe kahle ngo-15 kilogram, isithombe